Mboro yakazonzi musoro shweee vachibva vanyemwerera zvavo – Makuhwa.co.zw
Mboro yakazonzi musoro shweee vachibva vanyemwerera zvavo
Mboro yakazonzi musoro shweee vachibva vanyemwerera zvavo zvikanzi I love beche riri tight. Zvakazoitika nezuro, kubva makuseni ndaingonzwa kuda mboro ndokufonera muface wangu kuti auye mutown iye kwakunditora kuyenda neni muchicken inn. Ndingasvirirwe muchicken inn here nhai? Ndakaramba kupinda ave kuti kumovie house, tayenda kuye haachina chaakamboita, ndaiti zvimwe achapinzawo chigunwe mubeche kusvika ndatunda. Iye
aakungofambisa ruoko nepamsoro pemazamu achitotya kana kupinza ruoko mutop yangu.
Ndakambomubata bata ndichiti zvimwe angateedzerewo but ainge ave kutonyara murima imomo. Ndakapinza ruoko mupant make ndokunyatsonzwa kuti ane the right size yemboro yandaitsvaga. Pasina nguva ndakaona oburitsa ziso kunoibata so yaakutogwinha ainge
atozvitundira. Varume musaite madera muchidaro. Ndakakurumidza kubuda imomo ndave kutonotsvagawo angagone kundisvira. Ndichisvika kumba, ndakawana paina baba Sean muroja wedu, amai Sean vakaenda kumusha. Ndakasvikowana vakagara panze zvavo pamushana ndokuzama kuvaitira mastayera kuti vandisvire but vaitaridza kushaya
basa neni. Ndakapinda mumba ndatoona kuti hapana changu.
Ndakavagaira zano ndokupfeka ka mini skirt kangu kanogumira pakanotangira.
Ndakasvikogarawo nekanovel kangu pachair yaive kumberi kwavo. Ndakaona murume ongoita kucheka neziso ndikati zvangu zvaita. Ndaingoita kunge ndavarairwa
ndombovavhurira apa ndange ndiine kag-string zvekuti matama aro beche aibudikira. Pasina chinguva ndakaona murume kashort kaaive nako kave kufutawo ndikaziva kuti ndagohwesa.
Ndakatanga zvangu kaconversation kasina basa. Ndakabvunza kuti sei vasina kuenda kubasa. He said he was given a 1 week off and was going kumusha magwana kumbonopedza shungu. Ndakaseka zvangu ndikati nhema mukuda kutivhara mava nesmall house hobho kubasa ikoko.
He insisted that he was faithful kumukadzi wavo. Ndakaseka zvangu ndichivhura makumbo ndikati izvozvi mufon1 mamsg haupedze. Vakaburitsa foni zvikanzi oyi mainini mutsvage mega. Ndakasimuka ndichinotora foni iya ndakabva ndavati maita basa yave yangu ndaakutonobvisa line renyu. Ndakapinda mumba ndokudongorera kuti ndione kana vachiteera. Ndakaona mboro yakukwidzwa kuti ibatwe nebelt reshort ndokuvhara neT-shirt vachisimuka kuuya mumba. Ndakamhanyira muspare mangu ndokusvikobvisa top yandaive nayo ndokusara nebra chete. Ndakanzwa yave knock padoor ndikati aiwa bamkuru ndichambochinja. Ndakavhura door ndakabata foni mumaoko ndikaona murume aita
kunge abatwa nemagetsi akatarisa mazamu angu, ano matsvuku.
Related Topics:Mboro yakazonzi musoro shweee
Mudyiro wemboro wemusi uyu wakanga wakapenga ahh regai ndipengereke hangu!
Ndakamusvira nyoro ndikaita sendichabvarura beche nekunakirwa